Wararka naga soo gaaraya Degmada Caabudwaaq ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka socdo dagaal u dhaxeeya maleeshiyo beeleed ku wada sugneyd gudaha Degmada. Dagaalkan ayaa la sheegay in uu salka ku hayo Aanooyin qabiil, waxaana Dagaalka uu socdaa gudaha Degmada Caabudwaaq.
Iska Horimaadka ayaa waxaa uu bilaawday ka dib markii maleeshiyo beeleed ay weerar kusoo qaadeen goob u dhaw suuqa xoolaha Degmada Caabudwaaq oo ay ku sugnaayeen maleeshiyo beeleed kale waxaa dagaalka uu sababay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac.
Degmada Caabudwaaq ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacaayay dilal ku salaysan anoooyin qabiil iyo mid siyaasadeed . Odayaasha iyo waxgaradka ayaa wada dadaal lagu joojinayo dagaalka ka socda Degmada Cabdudwaaq.